I-7 yeepilili eziphilileyo ze-Nail ezingenatyhefu - Ubuhle
Ukuhombisa Gynaec Iincwadi Diy Ukutya Iinto Zokuzilungisa Ulusu Kwiindaba Ubuhle Bomtshato Imisebenzi Kunye Nemali
Izipikili ezisi-7 ezityebileyo ongazinxiba
Ukhe walibona igama elithi '5-free' kwezinye zeebhotile zakho zenzipho, kwaye yinto entle kakhulu leyo. Kuthetha ukuba isimahla kwezi zihlanu ze-carcinogens (i-formaldehyde, i-dibutyl phthalate, i-toluene, i-formaldehyde resin kunye ne-camphor) ezifumaneka kwi-lacquers. Ngethamsanqa, uninzi lweemveliso luye lwazisusa ezi zinto zinetyhefu kunye nezinye kwiifomula zabo ngelixa befumana iindlela zokugcina umgangatho kunye nokunxiba koogxa babo abaqhelekileyo. Nazi iintandokazi zethu ezisixhenxe.
Ezinxulumene: I-9 kaMeghan Markle-ephefumlelweyo yeNavy Nail Colors Colors
NgeeCawe Nail Polish
Esi sikhonkwane sinoxanduva kwezentlalo sihamba ngaphezulu nangaphaya kwendlela 'yasimahla-emi-simahla le ityhefu eyingozi, inkohlakalo yasimahla kunye nevegan. Kodwa ayithethi nje umdlalo omkhulu. Yonke imibala engama-50 iya kucoceka kakhulu kwaye ihambise amandla kunye nokuqaqamba okungapheliyo.
Xa ufuna i-nail polish enganxibi kakuhle kuphela, kodwa ikwaqinisa kwaye ikondle, olu hlobo luphumelela. Ikhululekile kwityhefu ezisithoba eziqhelekileyo kwaye ifakwa kwizinyibilikisi kunye nasekomelezeni i-botanicals ezinje nge-Primrose yangokuhlwa kunye neoyile yeentyatyambo ezihlaziyiweyo, i-chamomile kunye neevithamini A, E, kunye neB7. Ukuhlawulwa kombala kwangoko kunye nezibonelelo zexesha elide zezempilo? Sayina ubhalise.
Yithenge ($ 14)
Zoya Lacquer yobungcali
Ngoluhlu olutsha lwemibala ekhutshwe lonke ixesha lonyaka, kukho iindlela ezingasimahla ze-5 (ngaphezulu kwama-300 kunye nokubala) onokukhetha kuzo. Kwaye apha ucinga ukuba kuya kuba nzima ukufumana ucoceko olucocekileyo lwee-shades ezingacacanga ezinje ngegolide engentla eluhlaza.
Yithenge ($ 10)
I-Nail Lacquer yeCompulsive Compulsive
Nalu olunye ukhetho olungena-5. Kodwa ukusulungeka ecaleni, olu phawu lobuhle olungenantlonelo lolunye lokuqala (kwaye lubalaseleyo) ukubonelela ngemibala enesibindi, yokuyila ngaphaya kweempawu zakho eziqhelekileyo kunye nobomvu. Kwaye ekubeni sithetha ngeendlela ezinempilo apha, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zonke iipolish zayo ziipesenti ezili-100 ze-vegan kunye nenkohlakalo.
Tenoverten Isikhonkwane sasePoland
Umzi mveliso wefashoni owuthandayo, lo mgca we-8-simahla wee-lacquers ubonelela ngayo yonke into onokuyifuna kwipolishi yesikhonkwane: ii-shades ezingaphelelwa lixesha (ezinje nge-red-orangey red), isicelo esigudileyo nesilula kunye nesinxibo esinde, esikhazimlayo .
indlela yokunciphisa inkwethu kunye neenwele ziwa kunyango lwasekhaya
I-RMS yobuNgcali beePolish
Abalandeli bolu hlobo luthandwayo lwehlelo banokuthi banxibe ezinye zeempawu zalo (ezinje ngeLivingizer yeLiving apha), nabo. Iilacquers zihlala zinombala njengazo ezinye izinto zokuthambisa- kwaye zityibilika ngokulula ngaphandle kokuhamba.
Yithenge ($ 15)
Unyango lwe-Orly Breathable + Umbala
Ngelixa iinzipho kunganyanzelekanga ukuba 'ziphefumle' ukuze uhlale usempilweni, u-Orly wenza iipolishi ezivumayo ezivumela ioksijini ukuba iqhubeke ukuze ugcine iingcebiso zakho zifakwe umlinganiso olungileyo. Kwaye ukuba ayikuqinisekisi, kukho ivithamini B5 kunye neoyile yeargan kwifomula yokunceda ukutywina isivumelwano.
Ingxelo eyongezelelweyo nguBrianna Lapolla.
Ezona bhanyabhanya zokuzonwabisa zosapho
Izigaba Ifashoni Yomtshato Iindaba Zefashoni Iimveliso
kuchaphulo olu olungcono ubuhlobo
ezona bhanyabhanya zibalaseleyo zolutsha
umthambo ukuze ulahle amanqatha esisu ngokukhawuleza
Iimovie zekrisimesi zabantwana
Uluhlu olushushu lwefilimu eshushu yothando